यी राशिहरुबीचको प्रेम र बिवाह कहिल्यै सफल हुँदैन, जानी राखौं « हाम्रो ईकोनोमी
यी राशिहरुबीचको प्रेम र बिवाह कहिल्यै सफल हुँदैन, जानी राखौं
मानिस प्रेममा बाचेको हुन्छ । बिवाह मानव जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो । यो महत्वपूर्ण पाटो बिग्रियो भने जीवन नै तहसनहस हुन्छ । त्यसले पनि विवाह कस्तो व्यक्तिसँग गर्ने प्रेम कस्तो व्यक्तिसँग गर्ने ? तपाइले गरेको प्रेम विवाहमा परिणत हुन्छ या हुँदैन ? त्यसले सकारात्मत उर्जा दिन्छ या दिंदैन ? यो विषयमा जान्नु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विवाहमा राशिको पनि ठुलो प्रभाव रहने ज्योतिषीहरु बताउँछन् । प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । त्यसैले कुनै–कुनै राशिबिचको सम्बन्ध एकदमै नराम्रो हुने गर्दछ । उनीहरुबीचको सम्बन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने ज्यातिषीहरु बताउँछन् । केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ ।
यी राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छ :-
७. मकर र सिंह : हावी हुनु सिंह राशिको स्वाभाविक गुण भएका कारण मकर राशिका व्यक्तिलाई सम्बन्ध बिग्रने खतराको संकेत थाहा हुन्छ । यदि सम्बन्ध नबिग्रिएमा पनि यी दुई राशिबीच खुशीले बास पाउँदैन ।
१२. तुला र वृष : आर्थिक मामिलामा यी दुवै राशिबीच एउटै प्रकारको राय हुन्छ, तर यी दुवै राशि एक–साथ रहनु असम्भव जस्तै हो । वृष राशि पैसालाई लिएर खासै बहस गर्न मान्दैन, यस कारण तुला राशिका व्यक्तिलाई वृषको साथ निभाउँन गाह्रो हुन थाल्छ ।